အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: April 2008
အပြောမဟုတ် အလုပ်နဲ့ သက်သေပြ
လူ့ သတင်း..လူချင်း ဆောင်တဲ့ အမျိုး။
ကောက်ကျစ်သူ အချင်းက အလကား။
ရင့်ရဲ တည်ကြည်သော နှလုံး.
ပေါ်လိုက်ကြတဲ့ ဗေထိ မင်းသားမောင်
၂ ယောက်ရှိရင် တစ် ယောက်
အခွင့်အလမ်း အတွက်ဘဲ အချင်းချင်း တိုက်
ပြန့် ကြဲ လက်ချောင်းအား များစုစည်း
ရဟန်းတို့ သွေးနဲ့ ဆေး
ကျောင်းသားတို့အရိုးနဲ့ ခုခံပေး
မကြာမီ ဒို့ ခေတ် ရောက်တော့မည်။
မသဒ္ဓါ ( ၄။၂၉။၂၀၀၈) အတ္တကင်းသော ညီညွတ်ရေးသို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:45 AM2comments
Labels: Cheer, poem, Politics, Truth
သူယုတ်ပေါင်း တစ်ထောင်နဲ့ မလဲချင်။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၅။၂၀၀၈)
မိန်းမသားတဦး၏ ကြမ်းတမ်းသော အခိုက်အတန့် ကာလတွင် အဖော်ကောင်း အဖြစ် မေတ္တာစစ်များ နှင့် အားပေး ကူညီကြသော အကိုကြီး အမကြီး မောင်ငယ်ညီမငယ် တို့ အား မသဒ္ဓါမှ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့ သပါသည်။ ပို့ သသောမေတ္တာများ အတွက် ကျေးဇူး အထူးပါ။
အလင်းရောင်တွင် ပြန်လည် မွေးဖွားခြင်းတဲ့ဌက်
လမ်းလျောက်သင်စ ခလေးတွေ ချော်လဲ
လေငြိမ်တဲ့ အခါလည်း ရှိတယ်။
ခွင့်လွတ်သူ က အနိူင်ရစမြဲ
ဘဝက တစ်ကနေ ပြန်စမယ်။
အတ္တ မဲ့ မီးဌက်..
ပြာပုံကထ.. ဝေဟင်သို့ ပျံ။
မသဒ္ဓါ ( ၄။၂၅။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:59 AM0comments
မတရားမှုတွေ ကိုယ်တိုင်တွေ့ 
တရားဓမ္မ ဥပဒေကျမ်း နည်းနိဿ
ထုံးပေလက် တိုင်သုတ်တဲ့ ဘုရင့်လက်
ဟဲ့ ရဲရဲ ရင့်ရင့်ဖြတ်လှဲ့ ။
ပန်းတိုင်ဆီ မရောက်နိူင်သေးတဲ့ လမ်း
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:01 AM0comments
မကြီးရဲ့ မောင် နိူင်ငံသားကောင်းသို့ 
တီးရှော့ ထဲတွေခဲ့တဲ့ ရိုးသားသောမောင်လေး.
ထိုက် ကလေး တဲ့ သူနံမည်
မနှေးယခု သမိုင်းရဲ့ မှတ်တိုင်ပြု
နေ့ မအား ညမအိပ်
အင်တာနက်ချိတ် သတင်းပေးပို့ သူ
စေတနာနဲ့မေတ္တာရိသတင်းသမားလူ
Index on Censorship မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဂုဏ်ပြု
“ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ဆု”
မျိုးချစ်သားကောင်းတို့ ရဲ့ ကြက်သရေ
မြန်ပြည်သို့ဦးဆံဆွေးမြေ့တာဝန်ယူနိုင်ပါစေ။
မကြီးထံ မှ ပဏာချွေ
မောင်လေးသို့ရွင်လမ်းချမ်းမြေ့ မေတ္တာရည်။
မကြီးသဒ္ဓါ ( ၂။၂၄။ ၂၀၀၈) ဆထက်တပိုး..ကြိုးစားထမ်းဆောင်နိူင်ပါစေ မောင်လေးရေ.။ ပူဇော်ထိုက်သူ ကို ပူဇော်တာ မင်္ဂလာတပါးပါ။ အာဇာနည်ကောင်းမှန် နာမည် အမြဲ ရှင်သန်လျှက်ပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:12 AM0comments
ကိုယ့်ဖေဖေ နဲ့သူများဖေဖေ
ကြည်လင်နေတဲ့ မိုးသားပြာကြီး ပေါ်က
နော့ကာနော့ကာ လေထက် ၀ဲပျံနေတဲ့
အမြီးဖွားဖွားနဲ့စက္ကူစွန်ကလေးတွေ။
ကောင်းကင်မှာ တောင်ပန် ခတ်
မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်း ရဲ့ ခပ်စူးရှရှ အစိမ်းနံ့ လေးတွေ
ဖေဖေရယ်..သမီးခဏ လောက် ဒီမှာမှေး ပါရစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၄၀ က
၁၉ နှစ်မှာ အိမ်ကတွက်.. တက္ကသိုလ်တက်..
၂၃ မှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တက္ကသိုလ်ကဆရာမ
ကန္တာ ခရီးကို တယောက်ထဲကျော်တော့
အဖေ ကလေ ဂုဏ်ယူလိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်း။
ချစ်ရသော ယောက်ျားကို အဖေ့ လိုဘဲထင်
ရိုးသားစွာ မြတ်နိုး ကိုးကွယ်ဖူးတယ်။
အမှတ်မတင်တွေ့ ခဲ့ဘူးတဲ့ ယောက်ျားသား
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လောက် မှန်း
ကြာကြာလေ၀ါး ခါးသီးတဲ့ အရသာ
ကျီးအာသီးလို အရောင်ပျက် အာ
သူ့ သမီးကလေး အစား
သူ့ ဖေဖေ လုပ်တဲ့ နိူင်ငံရေး။
မိန်းမ ရှုပ်ရန် အတွက်။
ပွဲလန့်ရာ မင်းသားကြီး တက်လုပ်ရန်အတွက်။
ကောင်းမြတ်ဂုဏ် နဲ့ အဖေကောင်း
သမီးကောင်းရာသုဂတိသို့သမီးဆုတောင်း။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၄။၂၀၀၈)
ဖေဖေ ရယ် လွမ်းတယ်..သမီးမှာ ကာကွယ်သူ ဝေးတဲ့အခါ.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:39 AM0comments
တမင်လိုက်ရွာတဲ့ မိုးဆိုးနဲ့အသေဆိုးတဲ့ ကံဆိုးသူများ..
စပါးက ပိုးတွေကျနေ ငမြောင်တောင်
နားပေါက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ အမေ့ ရဲ့ နား
တဖြေးဖြေးဖွံ့ ထွား ချစ်ဇနီးရဲ့ ဝမ်းကြာတိုက်
သားလေးကို ရှင်အောင်မွေးနော် မေ
မောင်..ဟိုဘက်ကမ်း မှာ အလုပ်သွားရှာ.
သားလေးစာသင်ဖို့ငွေဒေါ်လာ။
မောင့် ပညာရေး မဖြစ်စလောက်နဲ့ 
မှင်ရွေရေး ခြယ်တဲ့ အိမ်မက်.
ဆေးခန်းမှန်မှန်ပြ. သမီးကိုစိတ်မပူနဲ့ 
သမီးရဲ့ စာရိတ္တ အမေသိပါတယ်။
မောင်လေးနဲ့ညီမလေး
ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ 
အမ ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ မိဘများသေသွား
မောင်နှမများ အမ ကျောင်းမထားနိူင်
မောင်နှမများကို ပညာတတ်အောင်လို့ ။
အမေ.မုဆိုးမ.. ပထွေးက အရက်သမား
အမေရယ် ကျမ.အတောင်ဖြန့် ပျံပါရစေ။
မောင်နဲ့ကျမ..နှစ်ယောက်သားဘဝစ
ဘဝ တခုလင်းလက်ဖို့အားကြိုးကုတ်
မိုးကုတ် မှာ မစားလောက် ကျောက်တွင်းကပြို
စစ်တပ်ရဲ့ဆက်ကြေးက တဖြေးဖြေး တိုးတိုးဆို
တအောင့်ကြာ အဖေ အဆင်ပြေ
ဖယောင်းတိုင်နဲ့သားစာကျက်စရာမလိုဘူး
လူုပေါင်းက ၁ဝဝ ကျော်..
ဟွန်း အမှောင်ထဲ လာစမ်းတဲ့လက်..
အသားချင်းထိ အခွင့်အရေး မယူစေချင်တယ်။
ကားရွေ့ တိုင်း ပုံအိတစုနဲ့တစု
မပူပါနဲ့မကြာခင် ရောက်တော့မှာ
အခုသာ အတွင်းထဲ မှောင်နေတာ
ကားရပ် တံခါးဖွင့်ချိန် အပြင်မှာနေခြည်ဖြာ
အနာဂတ်ရဲ့နေ့ သစ် လွတ်လပ်နယ်မြေမှာ။
အားလားလား .ပူမှ ပူ လိုက်တာ..
အအေးခန်း က လေဝင်ထုတ် မုမမှန်.
နှာဝ ဖျား ရတဲ့ ချွေးငွေ့ 
အသက်ရှုမဝ အော့အန်ဆို့ နင့်
အသားယူ ကျုမနား မကပ်နဲ့ 
တဖြေးဖြေး လေးလာတဲ့ အသက်ရှူသံများ
သူရင်ခွင်ထဲကျ လာတာက ဘေးကအပျိုလေး..
ငါကွ ပိုင်ပြီ လို့ လှမ်းအဖက်
ချွေးထပ်ထပ်နဲ့ သူမရဲ့ မျက်နှာနား ကပ်အသွားမှာ
ကောင်လေး ဝိညာဉ်လည်း လွင့်သွားရှာ..
ရေ အသက် တမနက်
လေ အသက် အသက်တစ်အောင့်
တဒုံးဒုံး နံရံကို ဆောင့်ကန်ဆဲ
ကယ်တော်မူကြပါ ကယ်ကြပါအရပ်ကတို့ 
ဒီအထဲဘဲ ရေတိမ်နစ် သေတော့မှာလား..
ကျွန်တော် တို့သေတော့မယ်
တံ ခါး ဖွင့် ပေး ကြ ပါ။
ဗုဒ္ဓ ရှင်..တ ပည့် တော် ကို ကယ် မ ပါ။
စစ်ကျွန်ဘဝ ရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားမဖြစ်ပါရစေနဲ့ 
သေအံ့မူးမူး..ပိုက်ဆံ အတိုးနဲ့ ချေးယူ
စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အောက်..အိပ်ရာဝင် ပုံပြင် တပုဒ်သည်။
မသဒ္ဓါ ( ၄။ ၂၃။ ၂၀၀၈)
အသေဆိုးဖြင့်သေရသော ညီမလေး မောင်လေးများကို ကြည့်၍ မသဒ္ဓါ၏ ကဗျာ ကာရန် ပျောက်နေသောဝေဒနာ ကြောင့် ကဗျာ အသစ်များ မတင်နိုင်ခြင်းကို နားလည်ပေးစေလိူပါသည်.။ တခါတရံ ကဗျာသမားသည် ဆို့ နင့်စွာ တိတ်တဆိတ် ကြေကွဲ ခံစား တတ်မှူကြောင့် ကာရန်တစ်လုံး ကဗျာ တစ်ပုဒ် မထွက်နိုင်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကို နားလည် ခွင့်လွတ်ပေးပါ။
ကံဆိုးသူများရေ..အမျှ အမျှ အမျှပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:26 AM0comments
ရဲရဲ နဲ့မဲမဲ သာဆန္ဒ ဒို့ ဖော်ထုတ်တင်ပြကြ
ထုံးဖြူဖြူ စေတီ မျှော်မဆုံး
သူ့ ကျွန်ဘဝက တော်လှန်ခဲ့
ငါတို့ ခေတ်မှာ အညွန့် ကျိုး.
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဗမာ..
အာဇာနည် မျိုးဆက်တို့ ရဲ့ ဂုဏ်သိန်ဟာ
နယ်စပ်ဖြတ် ကျွန်ခံခဲ့ ရတာ အသည်းနာ။
မြတ်နိူးစွာသော ဒို့ ရှင်သူမြတ်များ
သေကြေ စက္ခု အလင်းကွယ်နေတာ.
သံမဏိ အာဇာနည် မိန်းမတဦး
အိမ်ထဲပိတ် ၁၂ နှစ်ကြာ
ဒါ ဘယ်သူက မတရား ယုတ်မာ။
ဒါ ဘယ်သူ က သနားမညှာတာ။
ရန်ဆိုတာ ပြတ် ပစေ။
အမှန်ရဲ့ ဘက်တော်သားဆိုရင် ရဲရင့်စေ။
တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ ရဲရဲ
မိုးစက်တပေါက်နဲ့ရေကာတာ မပြို
မိုးရေထုကြောင့် ရေကာတာက ပြို..
မကြောက်မရွံ့ဆန္ဒကိုသာ
ရဲရဲနဲ့ မဲ မဲသာ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ကြစေလို။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:17 AM0comments
မငိုနဲ့ သမီး သားတို့ ..
ဒါဟာ ဇာတိ ..ဇရာ.ဗျာဓိ..မရဏ
ကျမတို့ ရဲ့ အစမကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
ကျမ တသက်မမေ့နိုင်အားတဲ့ ဝေဒနာ။
ချစ်သူကို စစ်ဘီလူးများ ဖမ်းထား
ဘယ်မှာဦိးမညွတ်. စွန့် ဝံ့ပါသည်။
ကျမတို့နှစ်ဦးလုံး။ အာဇာနည်ထောင်ထွက်
ဝိညာဉ် ခနွာ အသက်..တိုင်းပြည်အတွက်။
အိမ်နဲ့ထောင်.ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်
ချစ်သူနဲ့ ကျမဘဝဟာ တပြေးသားထည်း။
တပ်က စစ်ဆေးဖို့ လာဆွဲ
မျက်နှာမွဲနဲ့ လေးနဲ့ သား..
အမေ့ကို ကာကွယ်ဖို့ လက်ကာတား
“ အမေ့ကို ဘယ်ခေါ်သွားမှာလဲ”
ငိုသံပါလေး သူ မဝံ့မရဲ..
“ ဖယ်စမ်း သားလေး..
အမေ့ အရေးဟာ အမေ..
သားတို့ တော်သလိုသာ နေကြ.
သားတို့ ပျော်သလိုသာ နေကြ.
ချစ်သူဘ၀ မပျော်ရ မရွင်ရ.
နိူင်ငံရေး အကဲပေးတဲ့ ချစ်သူ
ပါရမီဖြည့် တဲ့ ကျမက
နိူင်ငံက ကျမတို့ ဘဝ
ကျမတို့ ဘ၀က..ကျမတို့ ဘ၀မဟုတ်။
ဒီလို အဖေအမေကို ရ
သားတို့ တနေ့ ကြီးရင်နားလည်မယ်.
အမေနဲ့အဖေနဲ့ ထောင်အ၀င်ထွက်
မိန်းမ ပီပီ..ကနွဲ့ ကရ
အမေနဲ့ အဖေ့ ဘဝ..
သက်စွန့်အနာခံ..ပျားလိုသာတုတ်ရန်.
အမေများ သေခဲ့ ရင်ဖြင့်..
အန်ကယ်ဦးလှရွှေ၏ဇနီး ကွယ်လွန်သူ အာဇာနည်မ အန်တီဒေါ်ခင်မာအေးကိုယ်စား ခံစားကြည့်ပေးပါသည်။ မှားရင် ခွင့်လွတ်ပါ မောင်လေးကိုအောင်သာရေ.။ မငိုပါနဲ့ သား..သားမေမေ သားနဲ့အတု အမြဲရှိနေပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:13 AM0comments
၁၀) Y မြစ်ချို (ကိုရီးယား)
ဆက်သွယ်ရန် thadarmay@gmail.com , kagway@gmail.com
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:49 AM0comments
ခွပ်ဒေါင်းနီတို့ပြည်တော်ပြန်
အမှန်တရား အတွက် မေ့သားကောင်း
အမျိုးချစ်တဲ့ ပြည်သူ့ စစ်သည်
ခွပ်ဒေါင်းသွေးနဲ့ရာဇပလ္လင်ဆေး
သမိုင်းကို ရေးမဲ့ ရက်များသည်
နိဂုံးမှာ စစ်အာဏာရှင် ပျက်သုန်းစေရမည်။
မသဒ္ဓါ ( ၄။၁၁။၂၀၀၈)
“ အိမ်ပြန်ချိန်တန်ပြီ..ခွပ်ဒေါင်းနီတို့..
ထလော့ တွန်လော့ တောင်ပန်ခတ်လော့
နိူးကြားပါစို့တိုက်ကြစို့ ”
မောင်လေး မိုးသီးဇွန်နှင့်တကွ..ကျောင်းသား တပ်မတော် ရဲဘော်ဟောင်းများသို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:06 AM0comments
အမှန်ဆိုရရင်..တကယ်ဘဲ No No
အနှစ် (၄၆) တိုင် ရက်ဆက်.
တစ်ရက် ထက် တစ်ရက် ဆုတ်ယုတ်
လှပတဲ့နိူင်ငံတော် ကို အသရေယုတ်အောင်
ပြည်သူများအဖို့ က ရင်နာ
ဒီလို လူ ကုန်ကူးခံရတဲ့ အဖြစ်.
ဗမာ့၏ သတ္တိ ကမ္ဘာက သိရအောင်.
ပြည်သူ တဦးချင်းစီရဲ့ ဆန္ဒ
ကိုယ်ရတဲ့ အခွင့်အရေး လက်မနှေးစေနဲ့ 
ရိုးရိုးသားသား အသည်းကြားက လာတဲ့ မဲတမဲ
ဟေ့..အမဲ ဘဲဟေ့ အမဲ ဘဲ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:05 AM0comments
အထူးသဖြင့်၊ ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသား မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကို မေးသင့်သလို၊ ပို၍ ထပ်ပြီးမေးသင့်သည်မှာ ပြည်ပ နဲ့ ပြည်တွင်း က ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးများတွေ၊ လေလှိုင်းတွေပေါ်မှာ မိုးလုံးထွားစွာ ပြောနေသောသူတွေ၊ ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ် ဆိုသောသူတွေကော၊ အရင်ကတော့ ဘာဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အခုတော့ ရ၅% ဘဲ ရတာလေးကို ဘဲယူပြီး ရသလောက် နေရာလေးဝင် ထိုင်ချင် သောသူတွေရယ်၊ ပြည်သူတွေဆန္ဒဘဲ ဆိုပြီး ပြည်သူကို အမြဲတမ်းခေါင်း ပြန်တင် ကာ စကားလှလှလေး သုံးပြီးတော့ ကိုယ်မနာရင်ပြီးရော ဆိုသော ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကို ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြတ်ပြတ် သားသား မေးရတော့ မဲ့အချိန်ကိုရောက်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံက အနှစ်၆၀ကျော်ကြာ ရှည်လျား ဆိုးဝါးလှတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်များ အလွန်၊ အကြမ်းဖက်ဝါဒများ ခေတ်စားလာနေတဲ့ ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာ ကျနော်တို့ဘက်က အကြမ်းမဖက် အနုနည်းသက်သက်နဲ့သာ စစ်အာဏာ ရှင်တွေ ကို တောက်လျှောက် ဆန့်ကျင်လာခဲ့တာပါ။ ဘယ်နှစ်ခါကများ စစ်တပ် ကတိတည်တာကို ရှိခဲ့ဘူးလည်း၊ ပြောရင်ပြောသလို၊ ဂတိက၀တ် ကိုကျေတယ်ဆို တာ ဘယ်မှာရှိသလည်း၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ရေးပြီး၊ ပြည်သူကို လိုက်လံချပြ စည်းရုံးရေးခဲ့သော မြန်မာ့ဆို ရှယ်လစ် အခြေခံဥပဒေကြီးကို တောင်၊ စာအုပ်ထဲကတခြား ၊အပြင်လက်တွေ့က တခြားလုပ် ဆောင်ခဲ့ကြတာ၊ပြည်သူကို ဘာကိုမက်လုံးတွေ၊ မဟာနိုင်ငံရေးအဘိဓါန် တွေပြောပြီး၊ ဘာလို့ ဒုက္ခ ခဏခဏ ပေးချင်ရတာလည်း ဆိုတာကိုလည်း သတိ ပြုကြပါအုံး ခင်ဗျား။
ဒီလာမယ့်ဆန္ဒမဲပေးပွဲဟာ ဘယ်လိုရလဒ်တွေပဲထွက်ထွက် အများပြည်သူအဆင့်ထိ ပြန့်နှံ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ တရား လက်လွတ် ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှု အဓမ္မစရိုက်တွေက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆီ ဦး တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနင်းရင်တော့ အနင်းခံရမှာပဲ ဆိုတဲ့အသိနဲ့ အားထားလုံခြုံရာ ဥပဒေ အစောင့် အရှောက်ကင်းမဲ့မှုတွေက ပြည်သူကို ချောင်ပိတ် အရိုက်ခံနေရတဲ့ ခွေးတွေပမာ ခံစားလာ စေရ လိမ့်မှာဖြစ်သလို၊ ဘယ်ကမှ အကာအကွယ်မရနိုင်ရှာတဲ့ အဲဒီပြည်သူတွေရဲ့ဘဝက စစ်အာဏာရှင်တစုနဲ့ သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေ ပြုသမျှ နုရတော့မယ့်အခြေကို လုံးလုံး လျားလျား ဆိုက်ရောက်သွားတော့မှာပါ။ လက်ရှိ အင်အယ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေကို အနိုင်ကျင့် ရိုက်နှက်ပြပြီးတော့ ပေးနေ တဲ့ သတိကိုက ပြည်သူတွေ နင်းမှာလား အနင်းခံမှာလား ဆိုတာပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:58 PM0comments
လွတ်မြောက်ဌက်များသို့တောင်းပန်ခြင်း
အားကိုး ပါတယ်လို့ 
ဒို့ တွေ ရှက်တတ်ကြစမ်းပါ။
လှောင်ချိုင့် ရဲ့အပြင်က လွတ်မြောက်ဌက်
သင်၏ လွတ်မြောက်ဖူးတဲ့ ကြည်နူးမှု
အစာဝဘူးတဲ့ အာသာ ပီတိ တစ်ခု
သူများကို အလှည့်ပေး နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်
သူတို့ လွတ်လပ်ရေးကို ရှာဖွေနေ
မမေ့နဲ့ သင်ဟာ ဗမာ။
စေတနာပွါးက ညောင်ပင်အလား များပြားပါခဲ့
အားကူလို့ ဝိုင်းပါလှဲ့ 
ရွှေချိုး ဖြူဖြူ..ကူစေချင်စမ်းပါရဲ့ 
ပါဝင်ကူညီလိုသူများ..ဆက်သွယ်ပေးကြပါ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ရင်း ပြောစရာမလိုပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:18 AM0comments
အမေ လူထုဒေါ်အမာသို့ တမ်းချင်း
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:19 AM0comments
မနုသ ဆီမီးတိုင်ဖြင့် ကော်ရော်ခြင်း။
ချိုးဖြူဌက် တောင်ပံဖြန့် ခါ။
တရားဥပဒေဆိုတာ ဗမာပြည်မှာ စက္ကူစုတ်
ဝန်ထမ်းတွေ မလှုပ်မပြုတ် ခေါင်းငြိမ့်
မဝရေစာ အစာကြွေး ချွေးသိပ်
သူခိုး မခိုးနိူင်ဘူးဆို တဲ့ ပညာ။
ပြည်သူတို့ ၏ အနာဂတ်က နတ္တိ။
ကျော်ကြားစေမဲ့အိမ်ဖေါ်မျိုးရိုး
အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အညွန့် ကျိုး
အသွေးသား တပါးသူ စုတ်စား
ဒို့ ဘိုးဘွား ပေးခဲ့တဲ့မြေ။
သာတူညီမျှ မောင်နှမတွေ ပျော်မြူးခဲ့တဲ့မြေ။
အမေ့ ထမီနား..နားပန်ရှေ့ ဆက်တက်.
သံသနာ နဲ့ အမျိုး ဘာသာ..
ဝံသာနု မျိုးချစ်တို့ရာဇဝင်ကြောင်း။
စစ်ကျွန် ဘဝနေကြရမှာ စိုးထိတ်ရွံ့ 
ကြောက်ရင်လွဲ ရဲရင် မင်းဖြစ်
လက်နက်နဲ့အနိုင်သိမ်းပွဲမှာ
မနူဿရဲ့ ဒိုင်းကာကို ယူ
မစတေးချင်ရင် ကြာကြာနွံ့ နစ်
ကျွန်တော် ကျော်ဇင်နိုင်နိူင်ငံကို အသက်ပေးချစ်ကြဖို့ 
မသဒ္ဓါ (၄။၆။၂၀၀၈) မီးရှို့ ဆန္ဒပြခဲ့သော သတ္တိရှင် မောင်ကျော်ဇင်နိုင် အတွက်
အမျှ အမျှ အမျှ ပါ သားရေ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:44 AM0comments
ခင်မင်ရပါသော ညီအစ်ကို၊ညီအစ်မတို့ ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်တို့ အချိန်မရှိတော့ပါ။ ထိုအတူ ကွဲပြားနေသော အခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုး ကြောင့်လည်း ရန်သူ မှာတဖြေးဖြေးချင်းကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နယ်မြေကိုလိုက်လံသိမ်းပိုက်သလို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်လံ သိမ်းပိုက် ထိုးစစ် ဆင်နေသည် ကိုတွေ့ ရ၊ မြင်ရပါသည်။
ကျွန်တော်မြင်သောအမြင်ကို သေသေချာချာ ဆန်းစစ်လေ့လာပြီး ပြည်သူကိုပြတ်ပြတ်သားသား လိုရင်းတို ရှင်း ပွိုင့် တစ်ခုတည်းကိုသာအခြေခံ၍ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကို NO VOTE လုပ်ရတယ်၊ VOTE NO ကိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာကို ပါ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စစ်တပ်သည် ၄င်းတို့ ၏လက်ကိုင်ဒုတ်များမှတဆင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ တွေဝေခြင်း၊ငတ်မွတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရသောပြည်သူတို့့အပေါ်တွင် မသမာသောနည်းပေါင်းစုံဖြင့် တရားသည် မတရားသည်ကို လည်းမမှုဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာလုပ်ဆောင်လာပါက ပြည်သူများရဲ့ အခြေ အနေ မှာ နောက်ဆုံး မဲရုံသို့ မဲသွားပေးသည့်အခါ VOTE NO ဖြင့်ဆက်လက်ဆန့် ကျင်ရန်ဆိုသော မူ ကိုချထား ကြသည် ကိုတွေ့ ရသည်။
( သိုသော်လည်း နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိပကတိအဖြစ်အပျက်ကိုသေသေချာချာသိရင်ဖြင့် ပြည်တွင်းမှ ကိုယ်တိုင် မျက်မြင်တွေ့ ရသော ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀မှာနင်းပြားဘ၀မှာထက်ပို၍ပင်ဆိုးသောအခြေအနေကို ရောက်နေကြပေသည်၊ မကျေနပ်သောလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ၊ စကားနည်းရန်ဆဲဆိုသောမှုကိုကိုင်ကာ နောက်ဆုံး အချိန်တွင်ကပ်ပြီးတော့ လုပ်မည် ဆိုသောနည်းကိုသာလျှင် ကျင့်သုံးတော့မည်သာဖြစ်သည်ကိုတွေ့ ရသည်)
ကျွန်တော်တို့ မှ တစ်လမ်းဘဲရှိပါတော့သည်၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံစကားလုံးများဖြင့်ပြည်သူကိုချပြနေရမဲ့ အချိန်မဟုတ်သလို ၊ အခင်းအကျင်း နိုင်ငံရေး သိပ္ပံမဟာ ဂုဏ်ထူးတန်းအောင်များ ရဲ့ အပြောအဆို များရဲ့ အသံကို လေလှိုင်းပေါ်မှ နေစဉ် ရက်ဆက်ချပြနေသောလည်း ပြည်ပသော်၎င်း၊ ပြည်တွင်းသော်၎င်း တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနှင့် ပညာတတ်အသိုင်းဝိုင်းများရဲ့ ၂% ပြည့်အောင်ပင် နားထောင် တွေးတောစဉ်းစားနေကြသော လူများလည်း မရှိကြပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဆိုးဝါးသောနေ့ တဓူဝ မိမိအိမ်ထောင်စု အသက်ဆက်ရှင်သန်ရေး၊ ဘိုးပိုင်၊ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်း ကိုမင်းမဲ့ ဥပဒေ အောက်တွင် လုံခြုံအောင်ထိန်းရေး၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်ဂရုစိုက်ရေး နှင့် ၊ ကိုယ်မိသားစု ဆိုတာကို သာဦးတည်နေရအောင် စစ်အစိုးရမှထောင့်ပေါင်း၊ နေရာပေါင်းစုံ၊နည်းပေါင်းစုံဖြင့် နှစ် ၂၀အတွင်း ကျုံးသွင်း ဆောင်ရွက်လာသောကြောင့် ဖြစ်လာသော အခြေခံ အကြောင်းတရား ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အများကြီး ပြည်သူကိုချပြပြောဆို နေစရာ၊ အခုချိန်မှာမလုပ်သင့်တော့သလို ၊ အခုချိန်မှာ နောက်ကြောင်းတွေကို ပြန်ပြီးတော့ ၊ခိုင်းနိုင်း တင်ပြပြောဆိုရမည့်၊ တခြား နိုင်ငံတကာအခြေအနေ၊ စံ ချိန်၊စံထားတွေနှင့်ယှဉ်တွဲပြောဆိုကာ အချိန်ကုန်၊ အချင်းချင်း သွေးဝမ်းကွဲ ရမည့်အချိန်လည်းမဟုတ်တော့ပေ။
ကျွန်တော်တို့ အနေနှင့်ပြည်သူကို ချပြပြောဆိုရမည်မှာ တစ်ခုတည်းရှိပြီး၊ထိုတစ်ခုတည်းနှင့်ပင် စစ်အစိုးရ ရေးဆွဲသော အခြေခံဥပဒေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့်ကွက်သည်၊ ဆန့်ကျင်သည်ဆိုတာကို ပြောဖို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထို အကြောင်းမှာ " န၀တ၊နအဖ စိတ်ကြိုက်၊ပုလင်းတူ၊ဗူးဆို့များမှာ အမျိုးသားညီလာခံမှထွက်လာသော၊ အတည်ပြု ထားသော၊ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရာတွင် အဓိကအခြေခံရမဲ့ အကြောင်းများမှ တဆင့် န၀တ၊ နအဖ စိတ်ကြိုက် ခေါင်းခေါက် ရွေးချယ်သော အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီမှ ရေးဆွဲ ထုပ်လိုက်သော
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ အဓိက၊ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ၏ အဓိကဖြစ်သော
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရပိုင်ခွင်၊လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ မဖြစ်မနေ ခံစားပိုင်ခွင်၊လွတ်လပ်ခွင့်၊ကိုးကွယ်ခွင့်၊ မျှတခွင့်၊ လုံခြုံသော ဥပဒေအောက် တွင် နေထိုင်ခွင့်၊ စသော Citizen Individual Right ကိုမတွေ့ ပါ၊
ကျန်သောအချက်များကိုကျွန်တောအနေနှင့် ဥပဒေပညာရှင်လည်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံဆရာလည်း မဟုတ်သောကြောင့် ၀င်ရောက်မဆွေးနွေးမပြောခြင်သောလည်း၊
ကျွန်တော်ပြောခြင်သောအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သောတိုင်းရင်းသား ပြည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ခြင်း၏ အဓိကသက်ဆိုင်သော individual right တစ်ခုမှ၊ ဘယ်အခန်းတွင် မှရေးသား ဖေါ်ပြထား ခြင်းမရှိပါ။ ထိုအချက်တစ်ခုတည်းနှင့်ပင်ကျွန်တော်တို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် ထိုအခြေခံ ဥပဒေကြီးကို လုံးလုံးလျားလျား ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကာ န၀တ၊ နအဖ ကျင်းပသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒယူပွဲ ကို ရိုက်ချိုးလို့ရသည် ၊
ပြည်သူများမှ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရ ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုကန့် ကွက်လို့ ရသည်ကို ဟု ပြောဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:44 PM0comments
တမင်လိုက်ရွာတဲ့ မိုးဆိုးနဲ့အသေဆိုးတဲ့ ကံဆိုးသူမျ...